"သစ်ခုတ်သမား" ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Zaw Hla Myint
တခါတုန်းက အလွန်သန်မာပါတယ်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ သစ်ခုတ်သမားတစ်ယောက်ဟာ သူဋ္ဌေးတယောက်ဆီမှာ အလုပ်ဝင်ခဲ့တယ်။ သူ့ ရဲ့ နာမည်ကျော်ကြားမှုကြောင့်ရော ခွန်အားကြောင့့် ရော လစာကတော့ တော်တော်ကောင်းတာပေါ့ ။ဒီအတွက်ကြောင့်လည်း သစ်ခုတ်သမားက သူလုပ်ရမဲ့အလုပ်ကို အကောင်းဆုံး လုပ်ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
သူ့ ရဲ့သူဋ္ဌေးက သူ အလုပ်ဝင်တဲ့ နေ့ မှာ ပုဆိန်တစ်လက်ပေးပီးတော့သူ ခုတ်ရမဲ့ ဧရိယာကို ပြပါတယ်။
ပထမနေ့ ..သူ သစ်ပင် (၁၈)ပင် ပြီးအောင် ခုတ်နိုင်ခဲ့ တယ်။
“ဂုဏ်ယူပါတယ်”လို့ သူဋ္ဌေးက သူ့ ကို ချီးမွမ်းတယ်။ “’ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်လုပ်သွားပါ”
သူဋ္ဌေးရဲ့ အားပေးစကားက သူ့ ကို အလွန်အားတက်သွားစေခဲ့ တယ်။
သူ ပိုကြိုးစားပီး ခုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ သူ ဒီနေ့ မှာတော့သစ်ပင် (၁၅) ပင်သာ ရအောင် ခုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သူ ပိုပြီး ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အားကြိုးမာန်တက်နဲ့သစ်ပင်တွေကို ခုတ်လှဲခဲ့တယ်။ နေ၀င်ချိန်မှာ ခုတ်ပီးတဲ့ အပင်တွေကို ရေ, ကြည့် လိုက်တော့ (၁၀) ပင်သာ ရှိကြောင်း ထူးဆန်းစွာ တွေ့ လိုက်ရတယ်။
တစ်ရက်ပီးတစ်ရက် သူ့ ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ကျ ကျလာနေတယ်လို့ သူ သိနေခဲ့တယ်။
“ငါ့ ရဲ့အင်အားတွေ ကုန်နေပီနဲ့ တူပါတယ်” လို့ သူ့ ကိုယ်သူ တွေးခဲ့ တယ်။
သူဟာ သူဋ္ဌေးဆီကို သွားပီး သူ့ ရဲ့ကျဆင်းလာတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် တောင်းပန်ပါကြောင်းနဲ့ သူ ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်နေပါရက်နဲ့ ဘာလို့ဒီလို ဖြစ်နေတာလဲ့ ဆိုတာကို သူကိုယ်တိုင်နားမလည် ကြောင်းကို ဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။
သူဋ္ဌေးက သူ့ ကို စူးစိုက်စွာ ကြည့်ရင်း…
“မင်း သစ်တစ်ပင်ခုတ်ပီးတိုင်း နောက်ဆုံးအချိန်တွေမှာ ပုဆိန်ကို ပြန်သွေးသေးလား”
"ဗျာ….ပုဆိန်ကိုလား….ပြန်သွေးရမယ်ဟုတ်လား…အဲဒါ ….အဲဒါတော့ ကျွန်တော် မလုပ်ဖြစ်ဘူးဗျ..ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် သစ်ပင်တွေကို ခုတ်ဖို့ အလုပ်အရမ်းရှုပ်နေတယ်လေ”
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဘ၀တွေလည်း ဒီလိုပါပဲ။ အချိန်တော်တော်များများမှာ အလုပ်တွေ ရှုပ်နေပါတယ်ဆိုပီး ပုဆိန်ရဲ့ အသွားကို ပြန်သွေး ဖို့မေ့နေကြတယ်။
အခုအချိန်တွေမှာ ကျွန်တော်အပါအ၀င်လူတော်တော်များ အလုပ် အလုပ် အလုပ်နဲ့ အလုပ်တွေကို ဖိပီး အမြဲတမ်း ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရင်းနဲ့ပျော်ရွှင်မှု ဆိုတဲ့ပုဆိန်သွေးတဲ့ အချိန်လေးတွေကို အမြဲတမ်းပျောက်ဆုံးနေရတယ်။
ပုဆိန်သွေးဖို့ ဘာကြောင့် လိုအပ်တာပါလဲ?
ဘာကြောင့် ပုဆိန်ကို သွေးဖို့ မမေ့ သင့်တာပါလဲ?
အလုပ်အရမ်းကြိုးစားတယ်ဆိုတာက မှားတဲ့ အချက်မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အလုပ်တွေကို ဖိလုပ်ရင်းနဲ့ဘ၀ရဲ့တကယ့် အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ရမဲ့အရာတွေကို မေ့ နေတာက လှစ်လျူရူ ထားတာက မှားတာပါ။
ကျွန်တော်တို့ မိသားစု အတွက် ပေးရမဲ့ အချိန်လေးတွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ရွှင်စွာ စကားပြောရမဲ့အချိန်လေးတွေ ချစ်ရသူတွေအတွက် ပေးရမဲ့အချိန်လေး…….စတဲ့ တကယ့် တန်ဖိုး မဖြတ်နိုင်တဲ့အစားပြန်မရတော့မဲ့အချိန်လေးတွေ (ပုဆိန်ကို ပြန်သွေးရမဲ့ အချိန်လေး)တွေကို မေ့ လျော့နေခြင်းပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အနားယူဖို့ မိသားစုအတွက် အချိန်ပေးဖို့ သင်ယူဖို့ နဲ့ရှင်သန်ဖို့ အတွက် အချိန်လေးတွေ ရှိရပါမယ်။
တကယ်လို့အဲလို အချိန်လေးတွေကို တန်ဖိုးမထား အလေးမထားခဲ့ ဘူးဆိုရင်တော့ တချိန်မှာ ၀မ်းနည်းကြေကွဲ ရပါလိမ့်မယ်။
မသွေးဘဲနဲ့ဆက်ခုတ်နေတဲ့ ပုဆိန်လို အချိန်ကြာလာတဲ့ အမျှတုံးလာပြီး စွမ်းဆောင်ရည်တွေပါ ကျဆင်းလာပါလိမ့်မယ်။
မိသားစုအတွက် သူငယ်ချင်းအတွက် ချစ်ခင်ရသူတွေအတွက် အချိန်ပေးပါ။ကြင်နာပါ။နွေးထွေးပါ။ဂရုစိုက်ပါ။
အစားထိုးလို့ မရတဲ့ အရာတွေ အတွက် နောင်တတွေ မလိုချင်ပါနဲ့ ။၀မ်းနည်း ကြေကွဲမှုတွေ ပါ အပိုပါလာတတ်လို့ ပါ။
✔ အရှင်နာယက ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ရဲ့ Post လေးကိုဖတ်ကြည့်အပြီး ရင်ထဲမှာတစ်ခုခုကျန်ခဲ့ရင်ကိုကျေနပ်ပါတယ်